China Industrial Flow Ultrasonic Extraction Equipment Equipment and Factory | Hangzhou Precision
Fitrandrahana ultrasonicdia mifototra amin'ny fitsipiky ny cavitation akustika. Ny fandentehana ny famotopotorana ultrasonic ao anaty ala-bozaka ahitra na ny vahaolana mifangaro amin'ny fakany, ny taho, ny ravina, ny voninkazo ary ny solvents maintso dia mety hiteraka hery mahery vaika sy volo. Aringano ny sela zavamaniry ary afaho ireo akora ao anatiny.
JH manome tsipika fitrandrahana ultrasonic indostrialy misy mizana sy endrika samihafa. Ireto misy masontsivana amin'ny fitaovana kely sy salantsalany. Raha mila ambaratonga lehibe kokoa ianao dia mifandraisa aminay mivantana raha mila antsipiriany.
MODELY JH-ZS30 JH-ZS50 JH-ZS100 JH-ZS200
hatetika 20Khz 20Khz 20Khz 20Khz
fahefana 3.0Kw 3.0Kw 3.0Kw 3.0Kw
Volta fampidirana 110/220 / 380V, 50 / 60Hz
Fahaiza-manao 30L 50L 100L 200L
Amplitude 10 ~ 100μm
Hamafin'ny Cavitation 1 ~ 4.5w / sm2
Fanaraha-maso ny mari-pana Fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny palitao
Herin'ny paompy 3.0Kw 3.0Kw 3.0Kw 3.0Kw
Hafainganana paompy 0 ~ 3000rpm 0 ~ 3000rpm 0 ~ 3000rpm 0 ~ 3000rpm
Herin'ny mpampirisika 1.75Kw 1.75Kw 2.5Kw 3.0Kw
Haingam-pandeha 0 ~ 500rpm 0 ~ 500rpm 0 ~ 1000rpm 0 ~ 1000rpm
Porofo mipoaka Tsia, fa azo namboarina
1. Ny fambolena herbal dia singa mora tohina amin'ny maripana. Ny fitrandrahana ultrasonic dia mety hahatratra ny fiasan'ny maripana ambany, hahazoana antoka fa tsy potika ireo singa nalaina, ary hanatsara ny bioavailability.
2. Ny tanjaky ny vibration ultrasonic dia mahery vaika, izay mampihena ny fiankinan-doha amin'ny solvent amin'ny fizotran'ny fitrandrahana. Ny solvent an'ny fitrandrahana ultrasonic dia mety ho rano, etanol na fifangaroan'izy roa.
3. Ny fitrandrahana dia manana kalitao avo lenta, fahamarinan-toerana matanjaka, haingam-pandeha haingam-pandeha ary vokatra lehibe.
Previous: Fitaovana fanomanana vitamina C liposomal ultrasonic
Manaraka: Mpanamboatra ranon-tsolika ultrasonic indostrialy